तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ-आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा ! « Sansar News
तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ-आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
१८ मंसिर २०७८, शनिबार ०७:२२
अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने हुन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला। काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला। समस्या दर्साउँदा सहयोगीको साथ जुट्नेछ। कामको चाप बढ्नेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
समय लागे पनि मिहिनेत गर्दा काम बनाउन सकिनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। विगतका कमजोरीमा क्रमशः सुधार आउनेछ। लगनशीलताले उपलब्धि दिलाउनेछ। काम पूरा नभए पनि लाभ हुनेछ। व्यापार–व्यवसायमा पनि सामान्य फाइदै हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ।
२०७८ मंसिर १८ गते, शनिवार, ४ डिसेम्बर २०२१
आज शुक्रवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !